Top 5 xịt giảm đau cơ bắp do chấn thương tốt nhất năm 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 xịt giảm đau cơ bắp do chấn thương tốt nhất năm 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ubuhlungu bemisipha ilapho amaqembu emisipha emzimbeni eshubile, efinyela, ehlehla, noma elimele lapho sizijwayeza kakhulu kwezemidlalo noma sikhubeke, siwe, noma singqubuzane phakathi nemisebenzi evamile. Ubuhlungu be-musculoskeletal bungaba esinye sezimpawu ze-pathological zobuhlungu be-musculoskeletal.
Ubuhlungu bemisipha buyimbangela yokukhathala nokucindezeleka, okuthinta ngokuqondile imisebenzi yethu yansuku zonke. Lapho uhlushwa ubuhlungu bemisipha, ngaphezu kwezinyathelo zokunciphisa ubuhlungu kanye nokwelashwa isikhathi eside njengemithi, ukusikhipha umzimba, ukutshopa, … singakhetha isifutho sokukhulula ubuhlungu ukuze sikhulule ngokushesha ubuhlungu.
Izinzuzo zamabhodlela isifutho sokuqeda ubuhlungu i-essence eqeda ubuhlungu esheshayo endaweni ye-muscle elimele ngoba uma ifuthwe, i-essence eqeda ubuhlungu ihlanganiswe kabanzi futhi ihlanganiswe ngokulinganayo endaweni ye-muscle elimele kunalapho usebenzisa amafutha ashisayo noma ama-massage. Ngenxa yokunciphisa ubuhlungu obusheshayo futhi obuphumelelayo, izifutho zokukhulula ubuhlungu zivame ukusetshenziswa ngokushesha ngemva kobuhlungu bemisipha noma ukulimala.
Ngalesi sihloko, ngithanda ukwethula kini imikhiqizo engu-5 ephezulu yokukhulula ubuhlungu bemisipha ethenjwayo namuhla.
1 1. I-STARBALM COLD SPRAY ibhodlela lesifutho elibandayo
2 2. Ibhodlela lesifutho se-Air Salonpas Jet le-Hisamitsu – Japan
3 3. Isifutho sokuqeda ubuhlungu
4 4. I-Magicode Freeze Spray
5 5. I-Painkiller Futha i-Bach Linh Dieu Santafa
1. I-STARBALM COLD SPRAY ibhodlela lesifutho elibandayo
Vimba ngokushesha indawo yokulimala, nciphisa isikhathi esiphezulu sokutholwa kokulimala.
Ubuchwepheshe be-Bag on Valve spray – obuhlukile kumabhodlela okufuthwa e-STARBALM – buyonga kakhulu kubasebenzisi.
Umsebenzi wokuzungezisa, isifutho esingu-360 degree, uphikisana nanoma iyiphi i-engeli.
Izithako ZINGAMI MAHHALA ngokuphelele – ziphephile kubasebenzisi, zingashiyi imiphumela emibi ngisho no-0.0001%.
Umkhiqizo wekhwalithi onenani elifanele lokusetshenziswa okuningi.
Kwenziwe ngokobuchwepheshe besimanje futhi ihlangabezana nezindinganiso eziqinile zezokwelapha eYurophu.
KUDALAI-Starbalm cold spray umkhiqizo owenziwe ubuchwepheshe besimanje futhi uhlangabezana nezindinganiso zezokwelapha eYurophu yaseNetherlands.
Isixazululo esisesimweni sezinhlayiya zenkungu ecwebe kakhulu manzisa ngokushesha indawo yesikhumba ngesifutho esi-1 nje.
Isixazululo sipholisa indawo yesilonda, sandise umkhawulo wokuvuselela imisipha yemisipha, futhi sibangele i-vasoconstriction.
Ngalesi sikhathi, inani lokujikeleza kwegazi liyancishiswa ukuze ligxile endaweni elimele, ukunciphisa ukuphazamiseka kwe-metabolic endaweni ebuhlungu, ngaleyo ndlela kunciphise ukuvuvukala kanye ne-edema.
Ibhodlela lesifutho lisebenzisa ubuchwepheshe bokucindezela komoya obugcwele – likusiza ukuthi usebenzise umkhiqizo kuzo zonke izindawo, ama-engeli anzima futhi kulula njengokuthatha isithombe ozishuthe sona.
Ngisho neconsi – sebenzisa umkhiqizo ngokucophelela ngaphandle kokushiya neconsi elilodwa, ukuze kungabikho ukumosha, imali oyisebenzisayo kumkhiqizo.
Xem Thêm Top 10 các shop bán quần áo đẹp trên Shopee mà bạn cần lưu vào ngay | Muasalebang
I-Starbalm cold spray isiza i-vascular system ukuthi iphinde ijikeleze futhi ijikeleze ngokushesha endaweni ebuhlungu.
Inani legazi elihlanzekile elijikeleza ngokushesha futhi ngamandla lizothwala imihuzuko nemfucuza esele, lisize ukuncibilikisa ngokushesha imihuzuko futhi linciphise ukuvuvukala ngokushesha kunasendaweni yokungasisebenzisi isifutho esibandayo se-STARBALM.
Isetshenziswa ngemuva kokulimala kwezemidlalo okubuhlungu (ama-sprains, imihuzuko, ukuvuvukala, ukulimala).
Shake kahle ngaphambi kokusetshenziswa.
Fafaza kanye ebusweni besikhumba, cishe u-10-15cm ukusuka ebusweni besikhumba, izithako ezisebenzayo zingena ngokuzenzakalelayo esikhumbeni, ungasebenzisi izandla zakho ukufaka / ukugcoba indawo efafaziwe. Isifutho esisodwa nje sanele ukumboza indawo enkulu yesikhumba. Ngemva kokugqoka izingubo usengakwazi ukufutha endwangu & umusi uzongena kancane kancane esikhumbeni.
Gwema ukuphefumula nokuthinta amehlo.
Ifanele abantu abadala nezingane ezineminyaka engu-6 ubudala.
Ungasebenzisi ukwelapha amanxeba avulekile.
2. Ibhodlela lesifutho se-Air Salonpas Jet le-Hisamitsu – Japan
Ngokushesha kukhulula irayisi elibuhlungu ngemva kwesifutho sokuqala.
Kubhekwa “njengesikhali esiyimfihlo” sabadlali bebhola kanye nabasubathi bezemidlalo emhlabeni wonke noma labo abavame ukusebenza.
Isiza ukukhulula ubuhlungu, ukulwa nokuvuvukala, kuhlanganiswe ne-methyl salicylate ukunciphisa ubuhlungu nokuvuvukala, ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi, ukukhulula ngokushesha izimpawu zobuhlungu.
Ukwelashwa okukhethekile kobuhlungu bemisipha namalunga obufana nobuhlungu behlombe, ukukhathala kwemisipha, ukukhathala kweqolo, ubuhlungu bamadolo, ukukruneka … ikakhulukazi imihuzuko encibilikayo kanye nokuvimbela izifo.
I-Air Salonpas Hisamitsu spray iyadingeka futhi ibalulekile kubadlali bezemidlalo okufanele bahlale bekhuthele futhi bephephe ngokuphelele kubasebenzisi.
Kulula ukuyisebenzisa, idizayini ehlangene, elungele ukuqhubeka nohambo.
Ibhodlela lesifutho se-Air Salonpas Jet le-Hisamitsu – I-Japan iwumkhiqizo oklanywe ngendlela yebhodlela lesifutho elingu-300ml ukusiza ukukhulula ubuhlungu ngokushesha, ngaphandle kwemiphumela engemihle, ephephe ngokuphelele kubasebenzisi. Ngezithako ezivelele ezifana nalezi: I-Methyl salicylate isiza ukukhulula ubuhlungu futhi inemiphumela yokulwa nokuvuvukala, i-Glycol salicylate ikhuthaza ukujikeleza kwegazi kanye nokukhulula ngokushesha izimpawu zobuhlungu. Umkhiqizo uphephe ngokuphelele ngaphandle kwemiphumela emibi. Ifanele abantu abanomkhuba wokudlala ibhola nemidlalo edinga amandla amaningi.
I-Hisamitsu’s Air Salonpas Jet inconywa ngezizathu ezilandelayo:
Umklamo womkhiqizo ulula futhi uhlangene, ungahamba nawo ukuze uwusebenzise noma nini lapho unenkinga ngamathambo namalunga.
Ifanele abantu abanomkhuba wokudlala ibhola nemidlalo edinga amandla amaningi.
Isiza ukukhulula ngokushesha izimpawu zobuhlungu. Kuyikhambi lobuhlungu behlombe, ukukhathala kwemisipha, iqolo, ubuhlungu bamadolo, ukukruneka…
Ngomklamo oqinile webhodlela lesifutho, lingathathwa ukuze lihambe noma livame ukusetshenziswa abasubathi ezinkathini eziningi zokuncintisana ezihlukene.
Ikhulula ukungezwani kwemisipha ngesikhathi sokuzivocavoca ngamandla.
Ingena esikhumbeni ngokushesha, ikhulula ubuhlungu obuvela ku-sprains ngokushesha nangempumelelo.
Ngaphandle kwalokho, ibhodlela le-spray nalo linomphumela omuhle wokulwa nokuvuvukala.
I-Methyl salicylate isiza ukuqeda imihuzuko ngokuphumelelayo.
Umkhiqizo uphephile, ulula futhi awubangeli imiphumela emibi, ikakhulukazi abagijimi kanye nabantu abavame ukusebenza.
Xem Thêm Top 5 Nước hoa Polo mùi nào thơm lâu, quyến rũ nhất hiện nay | Muasalebang
Geza futhi usule isikhumba esonakele.
Nyakazisa isifutho se-Air Salonpas Jet sokukhulula ubuhlungu ngaphambi kokusisebenzisa.
Fafaza endaweni ebuhlungu isikhathi esingaphezu kwemizuzwana emi-3.
Ungasebenzisi izikhathi ezingaphezu kwezi-5 ngosuku futhi ungasebenzisi ngokuqhubekayo izinsuku ezingaphezu kwezingu-7.
I-Air Salonpas Jet Pain Relief Spray ihloselwe ukusetshenziswa abantu abadala kanye nezingane ezingaphezu kweminyaka eyi-12.
Xhumana nodokotela wakho uma ufuna ukuyisebenzisela izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala.
3. Isifutho sokuqeda ubuhlungu
Isifutho sokudambisa izinhlungu ezibandayo sisetshenziselwa ukufafaza ngqo endaweni elimele lapho udlala imidlalo ukusiza ukukhulula ubuhlungu ngokushesha.
Umphumela omuhle kakhulu kubantu abane-sprains, osiza ukukhulula ubuhlungu ngokushesha nangempumelelo.
Ungabeki eduze nomlilo ngezinga lokushisa eliphezulu, ilanga eliqondile noma ubeke endaweni enengcindezi ephezulu.
Umkhiqizo we-TAAN wokukhulula ubuhlungu obandayo usetshenziselwa ukufafaza ngokuqondile endaweni elimele lapho udlala imidlalo ukuze usize ukukhulula ubuhlungu ngokushesha.
Umkhiqizo usebenza kahle kubantu abanama-sprains, unikeza ukukhululeka kobuhlungu okusheshayo nokuphumelelayo.
Isifutho esibandayo sezemidlalo se-TAAN esivela e-China siwumkhiqizo ophephe ngokwedlulele kubasebenzisi, esiza ekudambiseni ubuhlungu ngempumelelo nangokushesha.
Izinkomba: ukukhulula ubuhlungu, ukunciphisa ukuvuvukala, ukuvimbela ubuhlungu, ikakhulukazi izimpawu ze-sprains, ukulimala kwamaqakala, imiphumela esheshayo futhi enamandla.
Indlela yokusebenzisa: Shake kahle ngaphambi kokusetshenziswa. Qaphela ukuthi ungasebenzisi amanxeba avulekile. Fafaza ngqo endaweni elimele, gcina ibanga lika-15-20cm ukusuka emlonyeni uye esikhumbeni, fafaza izikhathi ezingu-3-5, ubuhlungu buzoncipha kakhulu, ukuvuvukala kuzokwehla futhi ungabuyela emisebenzini evamile. . Qaphela ukuthi ungangeni emehlweni nakwezinye izingxenye ezibucayi. Ukusetshenziswa kwangaphandle kuphela, ungaphuzi noma uhogele.
Qaphela: isifutho esibandayo sicindezelwe, ngakho-ke akufanele sibekwe eduze nomlilo onokushisa okuphezulu, ukukhanya kwelanga noma ukufakwa endaweni yokucindezela okukhulu.
4. I-Magicode Freeze Spray
I-Magicode Freeze Spray isinqamuleli sezinhlungu ezibandayo isifutho esibandayo sisetshenziselwa ukunciphisa imihuzuko, i-hematoma ngenxa yokulimala kanye nomthelela.
Amacala okuba ndikindiki emilenzeni yasentshonalanga, ubuhlungu behlombe nobuhlungu bentamo nakho kungasebenzisa lesi sidakamizwa.
I-Magicode Freeze Spray nayo isetshenziselwa ukudambisa izinhlungu ze-peripheral nerve, i-osteoarthritis kanye ne-sciatica.
Xem Thêm Cách sửa lỗi không vào được Play Store (CH Play) nhanh nhất | Muasalebang
I-Magicode Freeze Spray 150ml isifutho esibandayo esiqeda ubuhlungu siwumkhiqizo ovela eJapan. Lesi sifutho esibandayo esiqeda ubuhlungu sinezithako ezifana nalezi: Butane, Iso – butane, propane, Methylal, Propylene Glycol, Menthol ezisebenza kahle kakhulu ekwehliseni ubuhlungu nokuvuvukala. Umkhiqizo uphephe kakhulu ngaphandle kwezinto eziyingozi, uphephile empilweni yabasebenzisi.
Ukukhululeka ngokushesha kobuhlungu bendawo, ukukhululeka kobuhlungu be-peripheral, ubuhlungu be-musculoskeletal emaphethelweni, okusetshenziselwa imidlalo yokuxhumana enomthelela onamandla.
Umkhiqizo usekela ukululama okusheshayo kokulimala ngenkathi udlala nangemuva kokudlala.
Indlela yokupholisa ngokushesha, yenza isilonda sibe sasendaweni ukuze usize ukunciphisa ukuvuvukala komthelela.
Isetshenziswe ngokuqondile lapho ilimele, ungasebenzisi ngokuphelele ngamanxeba avulekile.
Thuthukisa ubuhlungu obuhlangene obungapheli.
Yehlisa ukulimaza kanye ne-hematoma ngenxa yethonya elinamandla; ukunciphisa ubuhlungu bemisipha nezinhlungu.
Shake ngaphambi kokusebenzisa.
Fafaza (futha) ngqo ezinhlungwini (isilonda) ukusuka ebangeni elingu-10cm. Ukusetshenziswa kwangaphandle kuphela, ungafafazi eduze kwamehlo, ungasebenzisi amanxeba avulekile noma esinye isikhumba esibucayi.
Vala ikepisi ngokuqinile ngemva kokusetshenziswa.
Ungasebenzisi izingane ezincane.
Gcina endaweni epholile, eyomile.
Gcina endaweni engafinyeleleki EZINGANE.
5. I-Painkiller Futha i-Bach Linh Dieu Santafa
Thuthukisa ubuhlungu: ubuhlungu be-osteoarthritis obubangelwa i-rheumatism, i-osteoarthritis, ubuhlungu bemisipha, ukuba ndikindiki ezithweni.
Yehlisa ukuvuvukala, ukuvuvukala kanye nobuhlungu uma kwenzeka kuba ne-sprains, i-hematomas, imihuzuko, ubuhlungu bomzimba ngenxa yokusebenza ngokweqile noma umthelela onamandla.
Ukukhulula ubuhlungu bemisipha ngemva kokusebenza ngokweqile noma imidlalo.
Yehlisa ukuvuvukala nokucasuka okubangelwa ukulunywa yizinambuzane.
Yehlisa ubuhlungu bekhanda obubangelwa umoya nemikhuhlane.
I-Painkiller Spray Bach Linh Dieu Santafa ingumkhiqizo ovela eVietnam. Umkhiqizo uhlanganiswe nezithako zemvelo ezifana ne: Umbrella, Uphondo Lwegazi, i-Dai Anise, i-Que humiliation, Code Money, Diaper, Poison, Millennium Sue, Uy Linh Tien, Ginger, ngakho-ke kuphephe kakhulu ukuthi abasebenzisi basebenzise.
Umkhiqizo ulungele abantu abanezinhlungu zemisipha, ukuba ndikindiki ezithweni, abantu abanezinhlungu nezinhlungu ngemuva kokusebenza kanzima noma ukudlala imidlalo. Abantu abane-sprains hematoma, ukuvuvukala okubangelwa umthelela kanye nokuluma kwezinambuzane, ukuqubuka, njll.
Fafaza isixazululo esikhumbeni esizothinteka, bese usigcoba imizuzu engu-5 ukuze isisombululo singene esikhumbeni futhi sizizwe sishisa futhi sinomswakama esikhumbeni.
Ingasetshenziswa izikhathi eziningana ngosuku ngemiphumela emihle.
Ukusetshenziswa kwangaphandle kuphela, ungafafazi ezilonda ezivulekile, ungaphuzi.
Funda imanuwali ngokucophelela ngaphambi kokuyisebenzisa.